Wasiir Rooble liiska kusoo dari waayay oo eedeyn ku jeediyay DF | KEYDMEDIA ENGLISH
Wasiir Rooble liiska kusoo dari waayay oo eedeyn ku jeediyay DF
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaan lagu soo darin liiska wasiiraddii hore ee dib loo magacaabey, iyadoo la sheegay inuu kamid yahay shaqsiyaadka saaxiibadda dhaw la ah Khayre.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Warfaafinta Xukuumaddii Khayre Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa soo saarey shalay qoraal uu eedeymo ugu jeediyay madaxda Villa Soomaaliya iyo Gollaha Wasiiradda cusub.
Maareeye oo ah mudane katirsan Gollaha Shacabka ayaa ku eedeeyay Wasiirro katirsan Xukuumada Rooble iyo xog-hayntiisa in ay faragalin ku hayaan hanaanka soo xulista xubnaha guddiyada doorashadda Xildhibaanadda Somaliland.
Wuxuu xusay in mid kasta oo kamid ah Gollaha Wasiiradda Rooble oo kasoo jeeda Somaliland uu wato liis u gaar ah uu ku saabsan magacaabidda guddiyada doorashooyinka wakiiladda Soomaaliland, isagoo arintaas ku tilmaamay mid aan la aqbali karin.
HALKAN HOOSE KA AKHRI QORAALKA MAAREEYE:
Comments Topics: musuq-maasuq rooble somaliland